Mogadishu Journal » 2020 » November » 13
Mahdi Guuleed: “Guddigii doorashada 2016 waxaa ku jiray xubno Xasan Shiikh la taliyeyaal u ahaa”
MUQDISHO:-Raisal Wasaare ku-xigeenka Somalia Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa ka hadlay guddiyada la magacaabay ee arrimaha doorashooyinka ee muranka badan uu ka dhashay. Musharaxiinta Madaxweynaha u taagan ayaa sheegay in xubno ka tirsan NISA ay ku jiraan guddigaas, taasoo ay...
Xan ayaa leh: Neymar ayaa lala xiriirinaya ku soo laabashada Barcelona.
Xiddiga Paris Saint-Germain Neymar ayaa lagu soo waramayaa inuu bartilmaameed u yahay Barcelona markale. Neymar ayaa markale lala xiriirinayaa inuu ku laabanayo Barcelona. Weeraryahanka reer Brazil ayaa ka tagay kooxda ka dhisan LaLiga isagoo ku biiray Paris Saint-Germain heshiis...
President Donald Trump and his Republican party allege that voting fraud and lost ballots led to his loss to Joe Biden in last week’s election. 13 Nov 2020 There is no evidence of compromised ballots or corrupt voting systems in the United States presidential elections, officials...
Dowladda Soomaaliya oo ku baaqday in la joojiyo dagaal beeleedyada ka socdo Gobolada Dhexe.
MUQDISHO:-Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Qadar) Mahadi ayaa oo ku hadlayay magaca dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku baaqday in la joojiyo dagaal beeleedka ka socda deegaanno ka tirsan gobollada dhexe ee dalka gaar ahaan gobolada Mudug iyo...
Raisul Wasaaraha Itoobiya oo Madaxweyne cusub u magacaabay gobolka Tigray
Raisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa madaxweyne Ku-meel-gaar ah u magacaabay Maamulka gobolka Tigray, xili uu socdo guluf dagaal oo dowladu ku qaaday gobolkaas. Dr. Mulu Nega ayaa noqday madaxweynaha KMG ah ee gobolka Tigray kaasoo soo dhisaya xukuumad ku-meel gaar ah oo ka...
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya doon ku burburtay xeebaha liibiya oo dad ay ku dhinteen/Sawiro
Gabar yar oo jirta lix bil ayaa ka mid ah 74 qof oo ku dhintay doon ku burburtay xeebaha liibiya. Doonta oo ay saarnaayeen muhaajiriin afrikaan ah ayaa labo cad u kala go,day sida ay sheegeen shaqaalaha gurmadka. Waxaa la arkayay qof dumar ah oo ku qeylinaya...
Madaxweyne Farmaajo oo saxiixay Heshiiskii Siyaasadeed ee doorashooyinka Dadban
MUQDISHO:-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay Heshiiskii Siyaasadeed ee Doorashooyinka Dadban kaas oo Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare ay si wadajir ah cod aqlabiyad ah ku ansixiyeen 26-kii Sebteembar 2020....